Manana Mpandresy Ny Fifaninanana Lahatsary An-tserasera Momba Ny Mpanjifa Tompon’andraikitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2017 5:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, srpski, Italiano, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Français, македонски, English
(Marihina fa tamin'ny 12 Novambra 2010 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Manana ny mpandresiny ny fifaninanana horonantsary fohy an-tserasera iraisampirenena faha-4 ho an'ny Kolontsain'ny Mpanjifa Tompon'andraikitra. Niantso ny mpifaninana amin'ny teny Espaniola ho an'ireo mpamokatra horonantsary fohy avy ao Espaina sy Amerika Latina ity fifaninanana ity, izay nokarakarain'ny ECODES sy ny Fitantanana Ankapoben'ny Fanjifana ho an'ny Governemantan'i Aragon. Ny sarimihetsika Kolombiana fohy no voafidy ho mpandresy tamin'ireo mpifaninana tafakatra famaranana iraisam-pirenena miisa 10.
Avy ao amin'ny faritra maro samihafa ao Espaina, Brezila ary Kolombia ireo mpifaninana 10 tafakatra famaranana. Asehon'ny The Recicleta ny fomba tsy hiainana ao anatin'ny fomba ara-ekolojika izay mety hiteraka hetsika henjana kanefa ilaina taorian'ny fivoahan'ny sarimihetsika mpandresy :
Ireto manaraka ireto ny lahatsary sasany tamin'ireo mpifaninana tafakatra famaranana. Mitondra ny lohateny hoe Plastic (plastika) ity lahatsary manaraka ity ary avy any Zaragoza, Espaina izay mampiseho antsika am-pitiavana ny fomba ilaina ny harona plastika fiantsenana ao an-trano. Afaka mitondra ny harontsika any an-kafa isika rehefa ao an-trano , fa tsy afaka manetsika izany ho any amin'ny toeran-kafa kosa rehefa eto ambonin'ny tany :
Avy any Brezila, nifaninana tamin'ny loka ihany koa ny Individual Choice (Safidy manokana). Asehon'ny lahatsary ny fomba ahafahana manatsara kokoa na manova ny fanapahan-kevitra rehetra raisintsika amin'ny fiainana isan'andro mba hahatonga antsika ho tompon'andraikitra kokoa manoloana ny tontolo iainana:
Azonao jerena ato amin'ity pejy ity ny sisa amin'ny lahatsary sy ny mombamomba ny hevitra ao ambadiky ny lahatsary sy ny mpamorona .